कोरोनाकालमा खुल्यो बिस्कुटको स्वाद चाख्ने जागिर, वार्षिक ६० लाख तलब !:: Naya Nepal
कोरोनाकालमा खुल्यो बिस्कुटको स्वाद चाख्ने जागिर, वार्षिक ६० लाख तलब !
कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका बेला धेरै व्यक्तिको रोजगारी गुमेको छ । कतिपय कम्पनी र अर्थतन्त्रमा धक्का लागेको छ । तर स्कटल्यान्डको एक बिस्कुट उत्पादक कम्पनीले आकर्षक जागिर खोलेको छ, आवेदकले बिस्कुट चाख्ने काम गर्नुपर्नेछ ।‘बर्डर बिस्किट्स’ कम्पनीले आवेदकसँग ‘मास्टर बिस्किटर’ पदमा आवेदन मागेको छ, आवेदकलाई बिस्कुटको स्वाद र बिस्कुट निर्माणबारे समझ हुनुपर्ने छ । ‘द इन्डिपेन्डेन्ट’मा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार आवेदकमा नेतृत्व र कुराकानी गर्ने कला समेत हुनुपर्नेछ ।कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक पल पार्किसले बिस्कुटप्रति चासो र लगाव भएका व्यक्तिका लागि यो राम्रो अवसर भएको जनाएका छन् । आवेदकहरूको क्षमता प्रयोग गरेर उत्कृष्ट बिस्कुट उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।कम्पनीका ब्रान्ड हेड सूजी करलाका अनुसार कम्पनी सर्वश्रेष्ठ स्वाद र गुणयुक्त बिस्कुट बजारमा ल्याउन प्रतिवद्ध छ, जसका लागि हामीलाई मास्टर बिस्किटरको खोजी छ ।कम्पनीमा जागिर सुनिश्चित भएपछि वार्षिक तलब ४० हजार पाउन्ड अर्थात् ६० लाख रुपैयाँ पाइने छ । जागिरका क्रममा वार्षिक ३५ दिन बिदा समेत पाइने छ । यो पूर्णकालीन जागिर हुने जनाइएको छ ।
ठेकेदारको बेवास्ताले पुल अलपत्र : दुई वर्षमा बनाउने सम्झौता साढे चार वर्षमा पनि पूरा भएन
मध्यपहाडी लोकमार्गको मल्मदेखि काँडेबासको पचुवा जोड्ने दरमखोलामा निर्माणाधीन मोटरेबल पुल बेवास्ताको सिकार
खोलाको वारिपारि फलामे रडसँग बुनेर पिल्लर ठड्याइएको छ । एकापट्टिको तल्लो भागमा ढलान गरिए पनि माथिल्लो भागको रड खिया लागिसकेको छ । खोलाको किनारमा राखिएका निर्माण सामग्री पानीले बगाइसकेको छ । हेर्दा लाग्छ, त्यहाँ पुल होइन, पुलको अस्थिपञ्जर छ । हो, मध्यपहाडी लोकमार्गको मल्मदेखि काँडेबासको पचुवा जोड्ने दरमखोलामा निर्माण थालिएको मोटरेबल पुल अहिले यही अवस्थामा छ । समयमै काम सकिएको भए दुई वर्षअघि नै यहाँ गाडी गुडिसकेका हुन्थे । तर, निर्माण कम्पनीले बेवास्ता गर्दा गलकोट नगरपालिका– ८ काँडेबासका स्थानीय अझै पनि सास्ती खेप्न बाध्य छन् । यो पुल निर्माण गर्न वाइपी कन्स्ट्रक्सनले ०७३ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)बाहेक पाँच करोड ४२ लाख तीन हजार सात सय ३१ रुपैयाँको लागतमा दुई वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिए पनि चार वर्ष बितिसक्दासमेत निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन ।
चार वर्षमा ३५ प्रतिशत काम
निर्माण कम्पनीले काम नगरेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिले सडक डिभिजन कार्यालय बाग्लुङदेखि प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको मन्त्रालयसम्म धाएको धेरै भयो । तर, जहाँ जति धाए पनि ठेकेदारले काम अगाडि नबढाएको गल्कोट नगरपालिका– ८ का वडाध्यक्ष रामप्रसाद कँडेलले बताए । ‘दुई वर्षमा सक्ने गरी सम्झौता भएको रहेछ । वडाध्यक्ष कँडेलले भने, ‘साढे चार वर्ष हुन लागिसक्यो, ३५ प्रतिशत पनि काम भएको छैन ।’ आफूहरूले सडक डिभिजनदेखि प्रदेश र केन्द्र सरकारसम्म धाएको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘ठेकेदारले नै लापरबाही गरेपछि कसको केही लाग्दो रहेनछ । हामीले धेरै धायौँ, तर काम भएन । अहिले त हार खाइयो ।’ यसरी करोडौँको योजना अलपत्र पर्दा पनि जिम्मेवार निकायले चासो नदिएको गलकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरेले बताए । उनले निर्माण कम्पनी र ठेकेदारलाई पनि सम्बन्धित निकायले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
पुससम्म म्याद थपियो, काम बढेन
सडक डिभिजन कार्यालय बाग्लुङका डिभिजन प्रमुख रामेश्वर लम्सालका अनुसार पुल निर्माणको जिम्मेवारी लिएको निर्माण कम्पनीलाई नियामवलीको नवौंँ संशोधनअनुसार सरकारले पुनः एक वर्षको म्याद थप गरिदिएको छ । तर, थपिएको मितिदेखि हालसम्म एक साइडको पी सेटमा एक लिफ्ट ढलान र केही जाली भर्नुबाहेक अन्य काम भएको छैन । कार्यालय प्रमुख लम्सालले आगामी पुस मसान्तसम्मको कार्यप्रगति हेरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए । वाइपी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक रविन जोशीले भने केही अवरोधका कारण काम अघि बढ्न नसकेको बताए । दक्षिणतर्फबाट निर्माण सुरु गरिएको, तर सुरुमै बाढी पसेर काममा अवरोध आएको भन्दै उनले पछिल्लो समय कोभिड– १९ संक्रमणका कारण निर्माण रोकिएको दाबी गरे । ‘बाढी र कोरोनाका कारण काममा ढिलाइ भएको हो,’ जोशीले भने, ‘हामी दसैँलगत्तै कामलाई निरन्तरता दिने तयारीमा छौँ ।’ स्थानीयवासी भने बाढी र कोरोना भन्ने कुरा ठेकेदारको बाहनाबाजी मात्रै भएको बताउँछन् । पचुवामा बन्न लागेको सो पुलले निर्माण सम्पन्न भएपछि काँडेबासलाई मध्यपहाडी लोकमार्गसँग जोड्ने छ । पुलले गलकोट मात्रै नभएर बरेङ गाउँपालिका र गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकालाई पनि मध्यपहाडी लोकमार्गसँगै सहजै जोड्ने छ । दरमखोलामा पुल नबन्दा वर्षायाममा यातायात पूर्ण रूपमा ठप्प हुने गरेको छ भने झोलुंगेपुल तरेर घन्टौँ हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ ।
नेपालीहरूको महान् पर्व विजया दशमी नजिकिएको छ । सधैं उत्साह र उमंगका साथ आउने विजया दशमी यसपटक भने समस्याकै भूमरीबीच भित्रँदै छ । सुविधाभोगी सत्तासीन व्यक्ति र केही सम्भ्रान्त वर्गका निम्ति यो सालको विजया दशमी सधैं जस्तै उल्लासमय भए पनि अधिकांश विपन्न नेपालीका लागि भने विजया दशमी बोझमाथिको बोझ बन्दै छ । ६ महिनादेखि कोरोना संक्रमणले थलिएका विपन्न वर्गको निम्ति दसैं उत्साहप्रद छैन । साँझ–बिहानको छाक टार्ने समस्यामा रहेका विपन्न नागरिकको दसैं खुसियाली कोरोनाले हरे पनि नागरिकको मनोबल र आत्मविश्वास हरिएको छैन । बनिबुतो गरेरै भए पनि दसैंमा रमाउने नेपाली परम्पराले निश्चय नै अहिले पनि निरन्तरता पाउने नै छ । तर, सदाझैं यसपटकको दसैं चिन्ता र समस्यामुक्त नभएको हुँदा दसैं मनाउने क्रममा सबैले विशेष सावधानी अपनाउनै पर्दछ ।विशेष तामझामको साथ होइन, अहिलेको दसैं हामीले मितव्ययी र सुझबुझका साथ मनाउनुपर्ने अवस्था छ । फजुल खर्च गरेर होइन, सीमित स्रोतसाधनभित्रै खुखियाली साटासाट गर्नुपर्दछ । यसका निम्ति सकारात्मक सोच र विचारको महानता सर्वोपरि ठानिन्छ । दसैंको चहलपहल प्रारम्भ भइसकेको छ । उपत्यकाबाट सतहत्तरै जिल्लातर्फ जाने र सीमित व्यक्ति उपत्यकामा भित्रने हाम्रो परिपाटी भएकाले कोरोना संक्रमणको बढ्दो वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरी सुरक्षा सावधानी नअपनाइए दसैंपछिको हाम्रो अवस्था कहाली लाग्दो हुन सक्छ । यसको निम्ति हामीले बेलैमा सचेत बन्नुपर्दछ । दसैंको सन्दर्भमा हामीले अपनाउनुपर्ने सावधानीको क्षेत्र पनि व्यापक छ । कुन अवस्थामा कस्तो साधवानी अपनाउने भन्नेबारे यहाँ संक्षिप्त चर्चा गरिन्छ ।
(क) यात्रामा रहँदा ध्यान पु-याउने कुरा:
दसैंमा अधिकांश व्यक्ति आफ्नो कार्यथलोबाट जन्मस्थलतर्फ लाग्ने भएकाले आवागमन गर्ने यात्रुको चाप अत्यधिक रूपमा बढ्दछ । वरिपरि छरिएर रहेका परिवारका सबै सदस्य एकै ठाउँमा जम्मा भएर आफ्नो हैसियतअनुसार खुसियालीका साथ दसैं मनाउने नेपालीको विशेषता नै हो । तर, यसपटकको दसैं साबिकको जस्तो चिन्तामुक्त छैन । आवागमन गर्ने व्यक्ति सँगसँगै कोरोना नपुगेको स्थानमा समेत कोरोना पुग्न सक्ने आशंकाले परिवारकै सदस्य त्रसित बन्नुपर्ने अवस्था छ । घर फर्कनेले पनि आफू कोरोना संक्रमित रहे नरहेको यकिन गरेर एवं सावधानी अपनाएरै मात्र घर जाने हो भने संक्रमण फैलन पाउँदैन । संक्रमणरहित व्यक्तिको यात्राको क्रममा संक्रमितसँग हेलमेल र सम्पर्कमा रहेको अवस्थामा आफैं संक्रमित बन्न सक्ने भएकाले कार्यस्थलबाट घरसम्म पुग्दा हामी सबैले यात्राको क्रममा विशेष सावधानी अपनाउने हो भने हामी कोरोनाको स्रोत बन्दैनौं ।यस क्रममा सरकारले तोकेकै मापदण्डभित्र पर्नेगरी सार्वजनिक यात्रुबाहक सवारी साधन प्रयोग गर्न पाइने अवस्था पनि हुँदैन । सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रुबीच यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर हुन्छ भने अर्कोतिर सहयात्री संक्रमित छ-छैन ? को कस्तो छ भन्ने कुरा पनि खुलेको हुँदैन । सहयात्रीमध्ये कसैलाई कोरोना संक्रमण भए यात्रारत सबैमा संक्रमण फैलन सक्ने सम्भावनाप्रति सबैले सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । घन्टौंसम्म सँगै सिटमा बसी यात्रा गर्दा, संक्रमित व्यक्ति नजिकै रहँदा, खाना नास्ता खाँदा, दिसा पिसाब गर्न एउटै ट्वाइलेट प्रयोग गर्नुपर्दा संक्रमितसँग जोगिन अत्यन्त कठिन पर्दछ । हरेक पलपलमा सचेत भइएन भने खतरामुक्त हुन कठिन पर्ने कुरालाई यात्रा अवधिभरै सबैले चनाखो रहनुपर्दछ ।
घन्टौंसम्म सँगै सिटमा बसी यात्रा गर्दा, संक्रमित व्यक्ति नजिक रहँदा, खाना तथा नास्ता खाँदा र एउटै ट्वाइलेट प्रयोग गर्नुपर्दा संक्रमितसँग जोगिन अत्यन्त कठिन पर्दछ
यात्रुहरू पनि सबै समान रूपमा सचेत नहुन सक्छन् । यात्रुबीचको दूरी कायम राख्न नसकिएको अवस्थामा यात्रुलाई सुरक्षित यात्रा गराउने मुख्य भूमिका सार्वजनिक सवारी सञ्चालककै हुन्छ । सवारी साधन पूर्ण रूपमा सेनिटाइज गरिएको छ÷छैन ? नभए यात्रु प्रवेश गर्नु अगाडि नै सेनिटाइज गर्ने, सबैलाई मास्क लगाउन लगाउने, बराबर सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने, कोही शंकास्पद संक्रमित भए सबैभन्दा पछाडिको सिटमा राख्ने, बसको झ्याल खोलेर चलाउने, यात्राको क्रममा मास्क खोल्न नदिने व्यवस्था यातायात सञ्चालकले मिलाउनुर्दछ । यातायात सञ्चालकले दिएको निर्देशन यात्रुले पनि पालन गर्नुपर्दछ । यात्रामा रहँदा सकेसम्म बाटोमा पर्ने होटल, रेस्टुराँको खाना खानुहुँदैन । आफ्नै घरमा बनाएको खानेकुरा बोकेर वा ड्राइफुटकै भरमा पनि यात्रा गर्नु उत्तम हुन्छ । सँगै सिटमा अपरिचित व्यक्ति भए सबैले एकै साथ खाना खानुहुँदैन । आलोपालोमा अघि पछि गरी सिटमै रहेकै बेला खाना खाइए एकबाट अर्कोमा संक्रमण सर्ने सम्भावनालाई न्यून पार्न सकिन्छ ।यात्राको समयमा अपरिचितले दिएको खानेकुरा खानुहुँदैन । अपरिचितसँग झट्ट विश्वास पनि गर्नुहुँदैन । कोही सहयोगी देखापरे अत्यावश्यक नपरी त्यस्ताको सहयोग स्वीकार गर्नुहुँदैन । यात्रामा कतिपय आपराधिक मानसिकताकै व्यक्ति पनि हुन सक्छन् । आफ्नो असावधानी र कमजोरी उनीहरूका निम्ति अवसर बन्न सक्छ भन्ने कुरा यात्रा अवधिमा हेक्का राख्नुपर्दछ । नाता सम्बन्ध केलाई जान पहिचान भएकै व्यक्तिको निकटतम व्यक्ति हुँ भन्ने बहाना बनाउने व्यक्तिसँग नजिक बन्नुहुँदैन । सहयात्रीको हाउभाउ र गतविधि ठीक नभए सवारी सञ्चालक वा बाटोमा पर्ने प्रहरीलाई जानकारी गराउनुपर्दछ । यात्राको समयमा ठूलो नगद रकम र गरगहना साथमा लिनुहुँदैन । साथमा भएको सरसामान ठीक हालतमा छ-छैन बराबर चेक जाँच गर्नुपर्दछ अनावश्यक हरकत गरिनुहुँदैन ।यात्राको क्रममा अपरिचितले दिएको खाद्य पदार्थ खाएर बेहोस बनी लुटिएका र बलात्कृत भएका घटनाहरू प्रशस्त छन् । अरू बेलाको समयमा भन्दा दसैंको यात्राको क्रममा यस्ता घटना बढी हुन सक्छन् । बसभित्रै राखेको झोला, सुटकेस अन्य सरसामान चोरी हुन सक्छ । सामान्य यात्रु सबै आआफ्नो धुनमा हुन्छन् तर आपराधिक मानसिकताको व्यक्तिले कुन यात्रुले केकस्तो सामान लिएर यात्रा ग¥यो ? उसले सामान कहाँ राखेको छ ? उक्त सामान कसरी हत्याउने भन्ने पूर्वयोजना अपराधीले मिलाएको हुन सक्छ । त्यस्ता शंकास्पद व्यक्ति सम्बन्धित व्यक्ति निदाएको मौका पारी सामानसहित बीचैमा उत्रिएर गायब हुन सक्छन् । यसतर्फ यात्रु सधैं होसियार रहनुपर्दछ । चाडबाडको समयमा घर पुग्ने क्रममा र घरबाट फर्किएर आफ्नो कार्यस्थल आउने क्रममा उपर्युक्तअनुसारको सावधानी अपनाइए अपराधीबाट जोगिन एवं कोरोना संक्रमणको खतराबाट समेत सुरक्षित बन्न सकिन्छ । यात्रामा सबैले ख्याल गर्नुपर्ने यो महŒवपूर्ण कुरा हो ।
(ख) दसैं मनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा:
दसैंको समयमा मान्यजनबाट नवदुर्गाको टीका तथा प्रसाद ग्रहण गर्न नजिकका आफन्त र नातेदारहरूको भिडभाड बढ्छ । वयोवृद्ध सदस्य रहेको घरमा टाढाटाढाबाट पनि आफन्त आउने, खुसियाली साटासाट गर्ने, वर्षभरिको दुःखकष्ट भुली परस्परमा रमाउने गरिन्छ । यसरी जम्मा हुने व्यक्तिहरू पनि सबै कोरोना संक्रमण मुक्त छन् भन्ने विश्वास हुँदैन । व्यक्ति नातेदार भए पनि कोरोना भाइरस आफ्नो हुँदैन भन्ने कुरा सबैले महसुस गर्नुपर्दछ । टीकाटालो गर्दा पनि सबैले मास्कको प्रयोग गरे संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ । आउने सबैले अनिवार्य रूपमै मास्क लगाउने कुराकानीको क्रममा र टीकाटालो गर्दासमेत मास्क नखोल्ने गरिए केही हदसम्म हामी सुरक्षित बन्न सक्छौं । कोही शंकास्पद संक्रमित भएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई अलगै राखेर टीका लगाइदिने, समूहमा घुलमिल हुन नदिने तथा आउने सबैले भौतिक दूरी कायम गर्ने व्यवस्था मिलाइए जोखिमबाट हामी मुक्त हुन सक्छौं ।अहिलेको दसैं सधैं जस्तो अवस्थामा छैन । टीकाटालो गर्न सधैंजस्तो टाढाटाढा धाएर जानु पनि उचित हुँदैन । आशीर्वाद लिनुपर्ने वृद्धवृद्धाको नजिक जानुहुँदैन । सार्वजनिक सवारीबाट दसैंको बेला आवागमन गर्न भिडभाडको कारण एकातिर यात्रा सहज हुँदैन भने अर्कोतर्फ सबै यात्रुहरू हुनुपर्ने हदसम्म सावधान नहुन सक्छन् । किनकि खानपान नै अनियन्त्रित बन्छ भने कतिपय आपराधिक मानसिकताका व्यक्तिका लागि भिडभाडको यात्रा मौकामा परिणत हुन्छ । पकेट मार्ने, गरगहना लुट्ने, सरसामान चोरी हुने, गुण्डागर्दी र अभद्र व्यवहार गर्ने घटनाहरू दसैंमा बढी हुन सक्छन् । सार्वजनिक सवारीबाट गरिने यात्रामा भौतिक दूरी कायम राख्न कठिन हुने भएकाले संक्रमणको जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । यसको साथै दसैंको समयमा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी खर्च गर्न हौसने र दसैं समाप्त भएपछि लामो समयसम्म पछुताउन गर्र्नुहुँदैन ।
आम्दनी खर्चको लेखाजोखा नगरी फजुल खर्च गरिए दसैं दशामा परिणत हुने सम्भावना उपर सबैले सावधान बन्नुपर्दछ ।
नवदुर्गाको मान्यजनबाट आशीर्वाद लिन चुनौतीपूर्ण ढंगले लामो यात्रा गर्नुभन्दा पनि फोन संवादबाटै आशीर्वाद लिँदा उत्तम हुनेछ
(ग) शंकास्पद अपरिचितसँग अपनाउनुपर्ने सावधानी:
दसैंको समयमा त्यसै पनि आपराधिक घटना बढ्छन् । कोरोना प्रभावको कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था नै अहिले धराशायी भएको छ । उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन हुन नपाउँदा आश्रित श्रमजीवी बिचल्लीमा परेका छन् । स्वदेश एवं विदेशकै रोजगारहरूले रोजगारी गुमाउनु परिरहेको छ । सरकारले पनि वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था मिलाउन सकेको छैन । श्रमजीवी हजारौं नागरिकहरू विदेशबाट फर्किएका छन् । स्वदेशमा भरपर्दो रोजगारीको व्यवस्था नहुँदा अधिकांश नागरिकलाई खान लगाउनकै समस्या परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा ज्यान बचाउनकै लागि पनि कतिपय व्यक्तिहरू आपराधिक कार्यमा संलग्न रहन्छन् । यो पृष्ठभूमिमा आएको दसैं सबैका निम्ति आकर्षक भए पनि सुखान्त भने हुन सक्दैन । यसैले दसैंको समयमा आपराधिक घटनाहरू बढ्न सक्ने भएकाले सबैले सचेत बन्नुपर्दछ । शंकास्पद र अपरिचित व्यक्तिसँग सधैं टाढा रहनुपर्दछ । यस क्रममा कतिपय चिनेजानेकै कुटिल मानसिकताका व्यक्तिले फसाउन र धोका दिन सक्छन् । कुटिल मानसिकताको व्यक्तिको हृदय स्वच्छ हुँदैन । अर्कालाई धोका दिने, जालझेल र छलकपट गर्ने, अर्कालाई फन्दामा पारी हैरानी दिलाउने कुटिल मानसिकताका व्यक्तिको आदत हुने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिसँग नजिकको हेलमेल गर्नुहुँदैन । सबैको आम्दानीको अवस्था र हैसियत पनि एकै हुँदैन । आफू परिश्रम र मिहिनेत नगर्ने अर्काले गरेको देख्न नसक्ने इष्र्यालु व्यक्तिहरू पनि हामीसँगै समाजमा रहेका हुन्छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरू मौका पर्दा जे गर्न पनि पछि नपर्ने भएकाले उनीहरूसँग सधैं सचेत बन्नुपर्दछ । यस्ता व्यक्तिबाट दसैंको समयमा बढी चुनौती आउन सक्छ ।वास्तवमा समस्यामाथि समस्या थपेर दसैं मनाउने, कोरोनाको जोखिमलाई वास्ता नगर्ने तथा आइलाग्न सक्ने सम्भावित चुनौती उपर सजग नबन्ने हो भने यही असावधानी नै हाम्रो लागि घातक बन्न सक्छ । यसैले सर्वप्रथम हामीले आफ्नो सुरक्षालाई सबैभन्दा महŒवपूर्ण ठान्नुपर्दछ । जीवन सुरक्षित रहे अन्य कार्यहरू क्रमशः हुँदै जान्छन् भन्ने कुरा बिर्सनुहुँदैन । दसैंको समयमा प्रायः गरी लुटपाटका घटनाहरू बढी हुने गर्दछन् । ऋण गरेरै भए पनि इज्जत धान्ने हाम्रो सामाजिक कुरीति अझै कायमै छ । हुने खानेले लाए खाएको देखेर समाजको सामु आफ्नो पनि इज्जत राख्ने उद्देश्यले हैसियत बेगरको रवाफ देखाउनु उचित हुँदैन । हुन त वर्ष दिनमा आएको चाड राम्रैसँग मनाउन भन्ने चाहना सबैको हुनु स्वाभाविक हो । कतिपयले ऋण गरेर लगाएको वा अर्कासँग मागेर लगाएकै गहना लुटिएर विचलित बनेका घटनाहरू पनि छन् । तथापि देखासिखीमा इज्जत हुन्छ भन्ने ठान्नु मूर्खता हो । सादा जीवन उच्च विचार व्यक्तिको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो । धन सम्पत्ति र गरगहनामा इज्जत हुँदैन, जति विचारमा स्वच्छता र महानतामा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले मनन गर्न सक्नुपर्दछ ।अहिलेको दसैं वातावरणीय समस्याको कारण उल्लासमय छैन । नवदुर्गाको प्रसाद थाप्न र मान्यजनबाट आशीर्वाद लिन चुनौतीपूर्ण ढंगले लामो यात्रा गर्नुभन्दा फोन संवादबाटै आशीर्वाद लिने । मान्यजनसँग अनलाइबाट भेट गर्ने, धाक रवाफ बेगर स्वच्छ र पवित्र मनले टीका प्रसाद प्रदान गर्ने मेरा लागि मात्र होइन अहिलेको दसैं सबैका लागि नै उल्लासपूर्ण छैन भनी समाजलाई हेरेर चित्त बुझाउने प्रयास गरिए यो दसैं बिग्रिए पनि आगामी दसैं हामी सबैको निम्ति उल्लासमय हुनेछ ।